Barcelona oo kaga shakisan Real Madrid inay sabab u tahay inaysan wali heshiis cusub ka saxiixan Ilaix Moriba – Gool FM
Xiddiga Chelsea ee Callum Hudson-Odoi oo shaki weyn abuuray kaddib shaacintiisa booqashadiisa Afrika & Inuu qaran baddesho oo suuro gal ah
Madaxweynaha La Liga oo ka hadlay waxa sharciga horyaalkiisa uu ka qabo xaaladda Barcelona iyo Ousmane Dembele
Pochettino oo walwal hor leh ku abuuray taageerayaasha kooxda PSG kahor kulanka Real Madrid
Barcelona oo qorsheeneysa inay la soo wareegto weeraryahan ka ciyaara horyaalka Premier League
Kooxda Liverpool oo indhaha la raacaysa da’yarka Real Madrid ee Eduardo Camavinga
Lionel Messi oo Hotelkiisii Lixaad ka furanaya dalka Spain… (Halkee ayay ku kala yaalaan Hotelladiisa kale?) + SAWIRRO
Real Madrid oo xiiseyneysa inay lasoo saxiixato xiddig ka tirsan naadiga Leicester City
Barcelona oo dooneysa inay saxiix weyn ku kabto booska difaaca bidix… (Waa kuma bartilmaameedkeeda?)
Booliiska oo labo qof u xiray fal-dambiyeed lagu weeraray difaaca Chelsea ee Antonio Rudiger intii lagu gudo jiray ciyaartii ay Blues garaacday Tottenham Hotspur
Dhaawac soo gaaray, rigoore uu khasaariyay iyo gurigiisa oo la jabsaday – maalin u xun Karim Benzema
Barcelona oo kaga shakisan Real Madrid inay sabab u tahay inaysan wali heshiis cusub ka saxiixan Ilaix Moriba
Ahmed Nur July 17, 2021
(Barcelona) 17 Luulyo 2021. Xiddiga khadka dhexe kaga ciyaara naadiga Barcelona ee Ilaix Moriba ayaa galay 12-kii bilood ee ugu dambeeyay qandaraaskiisa, walina ma uusan aqbalin inuu saxiixo heshiis cusub oo uu kooxdiisa kula sii joogayo.
Wararka kasoo baxaya dalka Spain ayaa sheegaya inay Barca kaga shakisan tahay Real Madrid inay si hoose uga shaqeyneyso inuusan 18-sano jirkan saxiixin qandaraas cusub si xagaaga dambe ay u helaan isagoo xor ah.
Bishii lasoo dhaafay ayaa lagu soo warramayaa inay naadiga Barcelona wada xaajood heshiis kordhin ah la billawday Moriba, hase ahaatee, waxay ku guuldarreysatay inay ku qanciso yabooh qandaraaskiisa loogu kordhinayo saddex sano waxaana haatan ay Blaugrana aaminsan tahay inay naadiga Madrid oo ay ku xafiiltamaan kulanka weyn ee El Classico sabab u tahay burburka wada xaajoodka sida ay Goal ku warrameyso.
Si kastaba ha ahaatee, Barca ayaa wali ku jirta dadaallada ay heshiiska ugu kordhineyso da’yarka khadka dhexe ka ciyaara inkastoo ay u sheegtay inuusan kooxda waaweyn kala qayb qaadan doonin isu diyaarinta xilli ciyaareedka soo socda illaa uu aqbalo inuu heshiiska u kordhiyo kooxda Camp Nou ku ciyaarta.
Cristiano Ronaldo oo ugu dambeyn go'aan ka qaatay mustaqbalkiisa xilli la xiriirinayo Man United iyo PSG
Paris Saint-Germain oo qorsho awood badan u diyaarisay Kylian Mbappe si uu u saxiixo heshiis cusub